Apt 28, Indlu yokuThumela
***I-LUXURY ABED AAPARTMENT EMBINI, ELALA ABANTU ABASI-7 ENTLIZIYWENI YASE-SOUTHPORT- INDAWO YOKUPAKA IYAFUMANEKA KWI-PROPATY NGENTLAWULO EYONGEZELELWEYO***
Eli gumbi liphezulu linamagumbi okulala amabini lihonjiswe kweyona migangatho iphezulu, kwaye lime kanye kumbindi weSitalato iLord eSouthport-isakhiwo esidala sokuposa, esithe saguqulwa saba ziindawo ezintle zala maxesha.
Iibhedi ezimbini zokulala zinokulala ukuya kuthi ga kwi-7 yabantu ngokukhululeka. Igumbi lokulala elikhulu lineebhedi ezimbini zesilivere ezimangalisayo ze-bespoke zaseFransi, ezinconywa yibhedi emhlophe yomqhaphu yaseJiphutha kunye netafile entle ehambelana nesinxibo yesiFrentshi efanelekileyo kuye nawuphi na uKumkanikazi ukuba asebenzise izimonyo zakhe. Eli gumbi lokulala lixhamla kwizixhobo ezigcweleyo ze-en-suite kubandakanya ishawa yombane, isiporo sethawula eshushu kunye ne-w / c. Igumbi lokulala lesibini libanzi ngokulinganayo kunye nebhedi yalo ephindwe kabini kunye nebhedi enye - eli gumbi libonelela ngeendawo ezininzi zekhabhathi kunye neemfama ezigcweleyo ezimnyama zokuqinisekisa ukuba unabo obu buthongo bude ububulangazelela.
Kukho igumbi lokuhlambela lesibini kwigumbi elixhamlayo ekuhlambeni, zonke izinto zokuhlambela kwigumbi lokuhlala yiVillroy & Bosch umyili wodidi oluphezulu. Indawo yokuhlala eneplani evulekileyo inekhitshi elinomgangatho ophezulu, elineekhabhathi ezikhazimlisiweyo ezimtyibilizi kunye neendawo zokusebenzela zeCorian-ikhitshi linconywa sisisomisi, isitya sokuhlamba izitya, imicrowave, isitovu semisesane emine, i-oveni kunye nazo zonke izinto zasekhitshini ozifunayo ukuze urhole. ukutya okuthandayo. Indawo yokuhlala isikhephe itafile yegumbi lokutyela elinesitayile saseFrentshi esilungele ukonwabisa iindwendwe zakho - kweli gumbi kukho iisofa ezimbini kunye nezitulo ezibini zeengalo ezijonge kwi-49 intshi ye-smart TV yeplasma. Igumbi ngalinye kwigumbi lokuhlala linescreen esisicaba seTV apho ungangena khona kwiakhawunti yakho yeNetflix okanye ukhuphele ibhokisi yakho yamva nje yokulutha. Le ndlu ine-Wi-Fi enesantya esiphezulu, isebenzisa indawo yayo yokupaka iimoto engaphantsi komhlaba kwaye yenza eyona ndawo igqibeleleyo yokuhlala.
Indawo yokupaka - kukho indawo yokupaka ekhoyo kwipropathi ngexabiso le-7.50 yeedola ngosuku kwindawo nganye. Sisebenzisa amasango akhuselekileyo epaki yemoto ephantsi komhlaba kwibhloko yezindlu onokuthi uqashe indawo yemoto kuthi ngqo. Sikwanazo neemvume zokupaka esitratweni ukuba le yinto onokuyikhetha. Nceda uqhagamshelane ukuze ulungiselele!
Ibhedi yelinen kunye neTowels - Le ndlu, ixhamla kwilinen yebhedi yomqhaphu emnandi yaseYiputa, kunye neetawuli zomqhaphu zomqhaphu zaseJiphutha ezibonelelwa lundwendwe ngalunye ngexesha lokuhlala kwabo kwigumbi. Zonke iindawo zethu zokulala zomile zicociwe kwaye zisanda ku-ayinwa.
Ikhitshi-Sibonelela ngazo zonke izixhobo zasekhitshini eziyimfuneko ukuze siqinisekise ukuba uhlala ulungile. Ukufikelela - Kukho ikhowudi yebhloko yendlu. Siya kubonelela ngemiyalelo yofikelelo xa sele ifunyenwe indlu xa sele ibhukisiwe kunye neeyure ezingama-48 ngaphambi kokungena.
Ukusebenzisana neendwendwe- Nceda uqaphele ukuba sisebenzisa inkonzo ye-app yeendwendwe, eya kuthi ikuthumele nge-imeyile ngokuzenzekelayo ikucela ukuba usayine imithetho yendlu yethu kamsinya nje ukuba ubhukishe nathi. Kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kokuba ubhukishe, uya kufumana isicatshulwa kunye ne-imeyile ekukhuthaza ukuba ucofe ikhonkco, elikuthatha likuse kwiwebhusayithi ephendulayo enemephu yendawo ohlala kuyo, izalathiso zokuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya, isikhululo sikaloliwe njl. Iiyure ezingama-48 ngaphambi kokuhlala kwakho uya kufumana enye itekisi kunye ne-imeyile eya kukuxelela ukuba iinkcukacha zakho zokufika zikhutshiwe enalo lonke ulwazi lofikelelo lokungena kwipropathi oyibhubhile ukuhlala kwakho. Siza kubonelela ngenombolo yefowuni yexesha likaxakeka ngexesha lokuhlala kwakho. Nceda uqaphele ukuba asinankonzo ye-concierge kwisiza, ngoko ke asikwazi ukugcina imithwalo ngaphambi kokuba ungene okanye emva kokuba usishiyile ipropati. Nceda uqaphele ukuba asikwazi ukubamba amatikiti kwimidlalo yebhola ekhatywayo/imiboniso yethiyetha yeendwendwe.
Ubumelwane-Indawo entle kakhulu, kumgama wokuhamba wePromenade, iSouthport Theatre kunye neZiko leNkomfa kunye neTheatre yaseAtkinson. Iivenkile, iivenkile zokutyela kunye neebhari zewayini kukuhamba nje okufutshane. Kwaye ukuba ungumdlali wegalufa onomdla, kutheni ungabinawo umdlalo kwiRoyal Birkdale eyaziwayo? Imizuzu eyi-10 kuphela ukusuka kwindawo yokuhlala.
Ukujikeleza-Isikhululo sikaloliwe kukuhamba nje okufutshane kunye noqhagamshelo rhoqo eLiverpool naseManchester.
4.70 · Izimvo eziyi-149
Izimvo eziyi-1 885
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Southport